Bamunini brother yemurume wangu vakayita kundizhaka nemboro – Makuhwa.co.zw
Bamunini brother yemurume wangu vakayita kundizhaka nemboro
Kunakirwa neMboro yaBamunini brother yemurume wangu. This is my short story, all comments are welcome. Ndinonzi Mai Belinda ndogara muHarare nemurume wangu and his young brother arikuenda kuUZ uko. Ndakasvika mumwe musi ndabva kumashops and dropped off nyama muKitchen and rushed into the bathroom to a wet towel as it was HOT, handina kuziva kuti maive nemunhu. Ndakaita kunge ndichafa pandakavhura door ndokuona Bamunini vakamira mushower vachibonyora vakabata panty yangu thong vakavhara maziso. Ndakaona kuti munhu haana chaakaona ndokuramba ndakayeva hangu munhu achibonyora nepace. Akatunda achidaidzira nevoice repamusoro achidaidza zita rangu. Ndakapererwa ndikashaya zvekuita ndokubva padoor paye ndisina kuonekwa.
Related Topics:brother yemurume wangu vakayita kundizhaka nemboro
Kubhadhara Julius chikwereti neNYINI asi aitya BECHE!
Unogona kunyora Joyce. Yangu yabva yati twiii.